आन्तरिक हवाई सेवा शरु भएको छ। नेपालमा सेवा दिइरहेका विभिन्न ९ वटा कम्पनीमध्ये ८ वटाले सोमबारदेखि सेवा शुरु गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत ११ गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा १८० दिनपछि शुरु भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गइरहेको अवस्थामा युनियनको निर्वाचन गर्दा थप संक्रमण फैलिने भन्दै उक्त निर्णय लिइएको बताइएको थियो।
तेसो चौथो हप्ता बढ्दो विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि सरकार एवं स्थायी सरकारले के-कस्ता भूमिकाहरू रहे ? साताभर कोरोनाको प्रभावलाई लिएर केकस्ता मागहरू गरिए ? सम्पूर्ण जानकारी एकसाथ एकठाउँमा पढ्नुहोस् ।
चौथो हप्ताभर बढ्दो विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि सरकार एवं स्थायी सरकारले के-कस्ता भूमिकाहरू रहे ? साताभर कोरोनाको प्रभावलाई लिएर केकस्ता मागहरू गरिए ? सम्पूर्ण जानकारी एकसाथ एकठाउँमा पढ्नुहोस् ।